Dib -u -eegista Caymiska Xoolaha ee Caafimaadka leh 2021 - Goobta Hantida
Bogga ugu weyn Faallooyinka Caymiska Caafimaadka Xoolaha ee Caafimaadka 2021
Sannadka 2021, Caymiska Caafimaadka ee Paws Healthy wuxuu lahaan jiray qaybtiisa fiirsashada ee caddaaladda ah. Waxaa qiimeeyay dadka ku jira qorshaha iyo dib u eegisyo kala duwan sida lala wadaagay.
Dabcan, qaar baa fiicnaa halka qaarna aysan sidaa u fiicnayn. Maqaalkan, waxaan ku eegi doonnaa Dib -u -eegista Caymiska Caafimaadka ee Caafimaadka Paws si aan u aragno inay tahay ikhtiyaar ammaan kuu ah adiga iyo xayawaankaaga.
Dib-u-eegista Caymiska Xayawaanka Caafimaadka Leh- Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad
Ka qiimaynta markhaatiyada kala duwan ee shakhsiga ah iyo dib u eegista macaamiisha, Healthy Paws Pet Insurance waa sharci.
Shirkadda aan khiyaanada lahayn ee bilawday 2009-kii oo ah caymis caafimaad leh oo caymis xayawaan ah iyo aasaas, waa faa'iido-doon loo abuuray si ay uga caawiso milkiilayaasha xayawaanka inay wax ka qabtaan waajibaadka maaliyadeed ee daryeelka xayawaankooda iyadoo sidoo kale caawinaysa ururada samatabbixinta xayawaanka si ay u daryeelaan xayawaanka jiran.
Waxay u oggolaanaysaa eeyaha iyo mulkiilayaasha bisadaha inay bixiyaan khidmad bille ah ama sannadle ah si ay u khiyaaneeyaan kharashka daryeelka xoolaha sida cudurrada shilalka kansarka daryeelka degdegga ah iyo daawooyinka. Waxay ku jirtaa kaalinta koowaad ee shirkadda caymiska xayawaanka ee 2021 waxayna leedahay 4.3 marka loo eego 5 xiddigood.
Akhri: 10 Qorshayaal Wadaag Caafimaad 2021 | Beddelka Caymiska Cusub
Caymiska Xayawaankayaga Caafimaadka Leh Ma Wanaagsan yahay?
Dib u eegista ha noo sheegaan. Caymiska caafimaadka caafimadku wuxuu bixiyaa hal qorshe oo fudud oo daboolaya shilalka iyo jirrooyinka oo ay ku jiraan lacag -bixinta sannadlaha ah iyo nolosha oo aan xadidnayn. Hadafku waa in la bixiyo caymiska ugu fiican ee suurtogalka ah iyadoo weli la ilaalinayo qorshaha la awoodi karo.
Marka wanaaggu banaanka u soo baxo xumaanta ay tahay inay wax ku baaqdo. Caymiska Caafimadka Caafimaadka leh marka loo eego dib -u -eegista ayaa kaalinta 1aad ka gashay Maraykanka. Wararka Qiimeynta caymiska xayawaanka ugu fiican.
Mid ka mid ah macmiisha ayaa sheegay in caymiska xayawaanka ee Healthy paw ay siisay nabada maskaxda iyo sidoo kale xayawaankeeda. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad soo dirtaa biilka oo aad sugtaa iyo inay iyadu kula talin lahayd qof kasta.
Dib u eegisyo kale oo badan ayaa ka marag kacaya xaqiiqda ah in Healthy Paws ay tahay shirkadda caymiska ugu fiican sababtoo ah caymiska kala duwan ee la bixiyo.
Waxay gacan ka geystaan ​​dhimista kharashaadka soo -dhoweynta, daawooyinka, xaaladaha degdegga ah.
Akhri: Faallooyinka Caymiska Nolosha Haven 2021: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Caymiska Xayawaanka
Sida laga soo xigtay ururka caafimaadka xoolaha ee Maraykanka milkiileyaasha xayawaanku waxay sannad walba ku bixiyaan in ka badan 27.8 bilyan oo doolar biilasha xoolaha.
Waxaan u daadagi doonaa sababaha ay dib u eegisyada Caymiska xayawaanka ee Paws Healthy u maleeyaan inay tahay tan ugu fiican;
#1. Waxay siisaa Kalsooni- Hal shay oo dib u eegista wanaagsan ee Caymiska Caafimaadka Paws Health ay wadaagaan waa xaqiiqda ah inay ka dhigto milkiileyaasha xayawaanka mid la isku halleyn karo oo siinaya labada xayawaan iyo kuwa xayawaanka ah xasilooni xagga maskaxda ah. Paws Healthy ayaa lagu yaqaanaa taageerada lacageed si ay macaamiisheeda u dareensiiyaan naftooda.
#2. Faa'iidooyinka sanadlaha ah ee aan xadidnayn: Siyaasadda Paws Healthy waxay la timaaddaa iyada oo aan lahayn xadka sannadlaha ah ee qiimaha dheefaha aad heli karto.
#3. Habka sheegashooyinka deg -degga ah oo fudud: Sida laga soo xigtay Healthy Paws, 99% ee sheegashooyinka waxaa lagu baaraandegaa laba maalmood gudahood marka lagu soo gudbiyo barnaamijka moobiilka ama mareegaha bixiyaha.
#4. Si otomaatig ah ayey isbarbar dhig ugu sameyneysaa tartamayaasha: Paws Healthy ma aha doorashada ugu fiican ee xayawaan kasta. Qalabkeeda xigashada onlaynka ah ayaa ku ogeysiin doona haddii aad ka fiicnaan lahayd bixiye kale.
#5. Waxaa taageeray Chubb: Siyaasadaha waxaa qoray Chubb, bixiye caymis caalami ah oo si wanaagsan loo aasaasay.
Faa'iidooyin ma jiri karaan la'aanteed faa'iidooyinkeeda. halkan ama faa'iidooyinka caymiska Paws Pet. Dib -u -eegisyo kala duwan ayaa noo sheegay sida ay u fiican tahay caymiska Caafimaadka Paws Pet laakiin dadka qaar ayaa weli haysta boosaskooda ku saabsan waxyaabo yar. Tusaale ahaan, macaamiisha qaar ayaa ka cawday kororka khidmadaha iyo khidmadaha billaha ah iyo adeegga macaamiisha.
Siyaasadda keli ah: Paws Healthy waxay bixisaa hal shil iyo siyaasad jireed oo aan lahayn hab lagu daro caymiska kaalmada.
Heerarka caynsanaanta xaddidan: Markaad iibsanayso siyaasad, xulashada caymisku waa yar yihiin. Waxaa jira saddex ikhtiyaar oo keliya oo loogu talagalay ka -goynta iyo heerarka lacag -bixinta, iyo xadka sannadlaha ah lama habeyn karo gabi ahaanba.
Wuxuu u baahan yahay imtixaan: Xayawaanka la qoray ee ku jira Paws Healthy waa inay maraan baaritaan caafimaad kaas oo muddada nimcadu ku kala duwan tahay da'da.
Aan ku habboonayn xayawaanka da'da weyn: Caymisyo badan oo xayawaanku waxay yareeyaan faa'iidooyinka xayawaanka waayeelka ah, laakiin Paws Healthy waxay soo rogtaa xannibaadyo daran xayawaan kasta oo ka weyn shan sano.
Daryeelka Macaamilka ee Liita- Macaamiisha Paws Healthy ee caafimaadka qaba ayaa ka cawday sida qofna uusan ugu muuqan inuu ka jawaabayo taleefanka. Markay ugu dambayn sameeyaan, waxaa la weydiistaa inay sugaan 2hours ama dib u soo wacaan. Tani waxay niyad -jab ku abuuri kartaa macmiilka cusub. Macmiil kale ayaa sheegay in wakiilka daryeelka macmiilku uu edeb daran yahay. Tan waa in la saxo ama haddii kale Paws Healthy ayaa laga yaabaa inay baaba'do iyadoon la garanayn sababta.
Habka Sheegashada Xanuunka leh- Habka sheegashada caymiska caafimaadka leh ee Paws Pet wuxuu noqon karaa mid daal badan. Macaamiishu waxay markhaati ka yihiin in marka sheegashooyinka la soo gudbiyo mararka qaarkood ay lumiyaan ama la diido taasoo keenaysa inay soo celiyaan marar badan iyadoon la bixin ballanqaadkii
Akhri: Dib -u -eegista Caymiska Gawaarida ee Xorriyadda ee 2021: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Dib-u-eegista Xayawaanka Caafimaadka Leh- Waa imisa?
Qiimaha Caymiska Caafimaadka ee Ceymiska Caafimaadka ee khidmadaha billaha ah wuxuu ka bilaabmaa $ 15 bisadaha iyo $ 20 eeyaha, laakiin celceliska lacagta billaha ah waa qiyaastii $ 30. Paws Healthy waxay dib u bixisaa 90% biilkaaga waxayna bixisaa saddex ikhtiyaar oo laga jari karo: $ 100, $ 250, ama $ 500.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee go'aamiya sicirka caymiska xayawaankaaga waa meesha aad ku nooshahay, qorshahaaga laga jari karo, nooca xayawaanka aad caymisid, iyo da'diisa iyo tarankiisa.
Kahor intaan xayawaankaagu helin caymis, waa in la baaraa si loo go'aamiyo kharashkaaga guud iyo in la baaro xaaladaha hore u jiray.
Waxay ku kala duwan tahay hadba da'da xayawaankaaga haddii ay tahay bisad ama eey iyo taranka. Tani waa sababta oo ah noocyada qaarkood waxay u nugul yihiin xaaladaha dhaxalka iyo dhasha ee kor u qaada daboolidda kharashaadka si markaas lacagta billaha ahi ay xoogaa sare u kacdo sababahan gaarka ah awgood.
Caymiska xayawaanka ee caafimaadka leh ayaa ku kacaya $39.10 bishiiba eeyaha, iyadoo lagu saleynayo siyaasadda muunada eey dhaddig oo isku dhafan oo hal sano jir ah oo miisaankeedu yahay inta u dhaxaysa 50 iyo 90 rodol marka si buuxda loo koray iyada oo leh 90% lacag celin ah iyo $ 500 laga jari karo sannadlaha ah.
Bisadda dhogor-gaaban ee lab ah ee hal sano jir ah oo leh siyaasad la mid ah, qiimihiisu waa $12.71 bishii bisadaha. Milkiilayaasha xayawaanka ayaa bixin doona khidmad macmiil oo cusub hal mar oo ah $ 25.
Ma jiraan khidmado qaansheegasho, mana jiro qiimo-dhimis xayawaan badan sida qaar ka mid ah shirkadaha kale ee qiimeyntayada.
Akhri: Faallooyinka Caymiska Liinta 2021: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Dib u eegisyada Caymiska xayawaanka ee Paws Healthy 2021- Sida ay u shaqeyso
Caymiska xayawaanka caafimaadka leh wuxuu bixiyaa hal qorshe oo loogu talagalay eeyaha iyo bisadaha oo daboolaya shilalka, jirrada, dhaawacyada, oo ay ku jiraan xaaladaha degdegga ah ee halkan daryeelka kansarka iyo xaaladaha gaarka ah ee taranka, iyo xaaladaha la iska dhaxlo iyo kuwa lagu dhasho.
Ma jiraan wax xaddidaad ah ama koofiyado caymis ah. Lugaha caafimaadku ma daboolayaan daboolida baaritaanka caadiga ah ee takhtarka xoolaha, tallaalada, iyo daryeelka ka hortagga sida nadiifinta ilkaha. Waxaa jira lacag hal mar ah oo ah $ 25 marka ugu horreysa ee aad ku qorto qorshe xayawaankaaga
Paws Healthy ma bixiyaan sicir-dhimis xayawaan badan sidaa darteed diyaar u noqo inaad bixiso qaddar buuxa ee xayawaan kasta oo qoyskaaga ka tirsan oo ku qoran qorshe
Paws-caafimaad leh ayaa bixiya Eunice caafimaad oo dhamaystiran iyo caymiska shilalka oo ay ku jiraan adeegyo kale sidoo kale way fududahay in la diiwaan geliyo oo laga xareeyo sheegashooyinka onlayn ama paws caafimaad leh, abka mobaylka. Sheegashooyinka si fudud ayaa looga baaraandegaa, si ku habboon, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad sawir ka qaadato qaansheegta oo aad geliso.
Milkiilayaasha xayawaanka ee iibsada caymiska Caafimaadka Caafimaadka waxay u furan yihiin caymisyo kala duwan. Waxay ka caawiyaan inay daboolaan cuduro kala duwan oo ay weheliyaan xaalado la iska dhaxlo iyo kuwa lagu dhasho iyo xaalado dabadheeraad ah sida kansarka, daaweynta ogaanshaha, iyo qalliin ay ka mid yihiin is -dul -saarid iyo dhex -dhexaadin.
Waxay bixisaa caymis kaas oo ka dhigaya xayawaanku inuu xaq u yeesho daaweyn kale sida acupuncture iyo daryeelka xanuunka loo yaqaan 'chiropractic care' ee xoolaha. Waxaa jira waxoogaa hoos -u -dhac ah sida khidmadda baaritaanka xoolaha oo aan lagu darin.
Xayawaankaaga waa in lagu qoraa qorshaha 15 maalmood kahor shilka ama baaritaanka cudurka iyo 12 bilood oo loogu talagalay dysplasia misigta haddii xayawaankaagu ka weyn yahay lix.
Paws Healthy ma laha koofiyad ama lacag bixin kasta oo shil ah, koofiyado sanadle ah, ama koofiyado nololeed.
Dib-u-eegista Caymiska Xoolaha Caafimaadka Leh- Adeegga Macmiilka (Mobile App iyo Online)
Aad bay u shaqaysay si loo fududeeyo hawsha sheegashadeeda. Waa la heli karaa ama si fudud ayaad u soo dejisan kartaa abka. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad sawir ka qaadatid biilka vet-ga oo aad ku dhejiso xarunta macaamiisha onlaynka ah ama abka mobaylka ee shirkadda.
Waxaad sidoo kale ku soo gudbin kartaa codsigaaga iimayl, fakis, ama boostada. Healthy Paws waxay sheegaysaa in sheegashooyinka badankooda lagu hawlgalo 10 maalmood gudahood. Marka la dhammeeyo, magdhawgaaga waxaa lagu soo saari doonaa 24 saacadood gudahood.
Waxaad dooran kartaa inaad ku hesho lacag -celintaada jeeg boostada lagu soo diray ama si toos ah bangigaaga loogu shubo saacadaha shaqada.
Paws Healthy ayaa sidoo kale bixiya ikhtiyaarka ah inaad si toos ah ugu soo celiso dhakhtarkaaga xayawaanka si waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad bixiso ay tahay qaybtaada biilka inta aad bixineyso.
Paws Healthy waxay bixisaa taageero telefoon iyo iimayl Isniin ilaa Jimce laga bilaabo 7:00 am ilaa 5:00 pm iyo Sabtida laga bilaabo 8:00 am ilaa 5:00 pm PT.
Faallooyinka Caymiska Caafimaadka Caafimaadka- Sida Loo Joojiyo
Si aad u tirtirto siyaasaddaada Caymiska Paws Pet Healthy:
Ka wac adeegga macaamiisha 855-898-8991
Weydii inaad la hadasho wakiil.
Sii iyaga lambarkaaga siyaasadda iyo faahfaahinta macmiilka.
Codso in la joojiyo siyaasaddaada iyo lacag -bixinta soo noqnoqota.
Ka jawaab su'aalaha daba-galka ah si loo xaqiijiyo.
Si aad u baajiso internetka, booqo https://www.healthypawspetinsurance.com/frequent-questions
Si aad u tirtirto telefoonka, wac: 1-855-898-8991
Faallooyinka Caymiska Caafimaadka ee Caafimaadka leh ayaa nala wadaagay calanka gaduudan iyo qaybaha wanaagsan ee shirkadda. Iminkana waad qaadan kartaa go'aankaaga haddii aad weli doonayso inaad dhex marto iyo in kale.
10 Meelood ee Ugu Fiican Si Looga Dalbado Jeegaga Qadka 2021
Sida Loo Xareysto Shaqo La'aanta New York
Haddii aad ku weyday shaqadaada New York sababtuna tahay cudurka faafa ee coronavirus ama sabab kasta oo kale.…
Ma waxaad tahay mid ka mid ah kuwa u malaynaya inaysan jirin wax sabab ah sababta ay tahay in caymiskooda baabuurku noqdo…